Ukuba ufumanisa rhoqo ukubona i-10: 10 xa ujonga ixesha kwaye uzibuze ukuba ngaba kukho umyalezo ofihliweyo emva kwawo, intuition yakho ichanekile. Ndiyathemba ukuba ukhokelwe apha ukuze ufumane malunga nentsingiselo ye-1010 njengoko uhamba kwindlela yakho ngalo mzuzu ngexesha.
Uqala ukuqonda ukuba ukubona inombolo ye-1010 ngokuphindaphindiweyo ayisiyongxaki nje kuba unolwazi olunzulu lokuba i-1010 ngumyalezo ovela kuThixo kuwe. Umhlaba kunye neqela lakho lasezulwini leengelosi kunye nezikhokelo zomoya bafuna ukuba wazi ukuba 1010luphawu lokusebenza kunye nokuhamba phambili. Njengenani leengelosi, intsingiselo ngokubanzi ye-1010 imalunga nokuhamba usiya kwinjongo yakho ephezulu ebomini. Thembela indalo kunye nento ekugcinele yona . Izinto zenzeka ngesizathu, kwaye emfanekisweni omkhulu, isiqu sakho esiphakamileyo siyayazi eyona ndlela yokukufikisa apho kufuneka ubekhona . Yiba nokholo lokuba yonke into iyenzeka ngenxa yakho. Kwaye khumbula, indalo iphela ihlala izisebenzela ekugqibeleni.
Khumbula ukuba xa ubona ipateni yamanani engu-1010 iphindaphindeka, kukho iintsingiselo ezahlukeneyo, kwaye kubalulekile ukuba uyithembe intuitiveness yakho kwaye uqonde ukuba ngu-1010 ngokomfuziselo oko kuthetha kuwe.Nje ukuba ukhethe lo myalezo, uya kusiqonda isizathu sokuba ubone u-1010, kwaye uya kusebenzisa olu lwazi ukukukhokela kwindlela yakho eya phambili.Ukukunceda xa usendleleni, nazi iintsingiselo ezi-4 zokomoya ezili-1010 kunye nezizathu zokuba uqhubeka ubona inombolo 10:10 kuyo yonke indawo.
Intsingiselo yokuqala ye Ngo-1010: Yonke into isebenza ngokuLungileyo
Ithetha ntoni i-1111 kwinombolo
Amanani amabini okuqala 1 kunye no-0 abaluleke kakhulu. Inombolo 1 kuthetha ukuya kwisiqalo esitsha, ukuqala ngokutsha okanye ukuvula kwindlela entsha yobomi. Kwelinye icala, u-0 ubonakalisa ukufudukela kwindawo enkulu, apho yonke into ivela kuMdali kwaye konke kuya kubuyela kuMdali. Ngamanye amagama, ukunyathela kwisandi esiphezulu kakhulu, ukuya kumaxesha aphakanyisayo asondele kulwazelelo lukaThixo.
NgokukaDoreen Virtue Ingelosi iNumeri 101 , xa omabini la manani edityanisiwe ukwenza ifom 10, umyalezo opheleleyo kuwe kukugcina iingcinga zakho zilungile kwaye ube nomonde njengoko yonke into isebenzela ukulungelwa kwakho okuphezulu. Xa ubona inani u-10 kabini, oku kuthetha ukuba umyalezo ka '10' unamandla.
Ke, ukuba uhlala ubona u-10: 10, themba ukuba i-Universe isebenza ngasemva ukuze ikuncede, kwaye uvuleke ukuze ufumane nantoni na oyifunayo ekukhuleni komphefumlo wakho.
Intsingiselo yesi-2 ye Ngo-1010: Uvusa isiqu sakho soMoya
Njengoko ukhula ngokwasemoyeni kuhambo lwakho, ukwinkqubo yokuvusa isiqu sakho, kwaye uyakhumbula ukuba uMdali oNgcwele ukuwe nakuko konke okukungqongileyo. Intsingiselo ye-1010, kule meko, kukuba ukulungele ukuhamba ngendlela entsha eya kuthi ikhokelele ekufezekiseni amazwe aphezulu okuqonda njengoko uqala ukuphonononga indima yakho ekhethekileyo kule ndawo iphela.
Kwaye xa ufumana isibindi sakho sokufumanisaungubani kanye kanye, Uya kuba nakho ukuphakamisa isigqubuthelo seemfeketho kwaye ubone umhlaba ngamehlo aphezulu akho. Uya kuyazi ngakumbi into ocinga ngayo, into oyithethayo, kunye nento oyenzayo njengoko umlilo woMdali ukutshisa 'omdala' kuwe. Kwaye ngalo mzuzu uqala ukuziva kwaye ubone umphefumlo wakho ngokucacileyo.
Intsingiselo yesithathu ye 1010: Ukulungele ukuthatha inyathelo
Xa uvulelekile ekwamkelweni, uzilungelelanisa noMdali kunye namandla endalo iphela. Ngoku kunakuqala, kufuneka uhlale ugxile kwizinto ofuna ukuzifumana kobu bomi.
Kuya kufuneka unyamezele kwinto oyinqwenelayo kwaye uzabalazele ukugqwesa. Nantoni na ogqiba ukuyenza, qiniseka ukuba uzibophelele ukuyenza kakuhle. Yiba induli ukuba akunakuba yintaba. Ukuba awunakuba lulwandle, yiba lichibi. Ayibobungakanani obumisela impumelelo, kodwa yeyona nto uyiyo .
Khumbula, ungumdali wenyani yakho. Iingcamango zakho ziba ngamazwi, kwaye amagama akho abe zizenzo.Nanini na xa ubona i-10: 10 iphinda, uyakhunjuzwa ukuba wenze oko umphefumlo wakho ukufunayo. Ngale nto uyiqondayo, uyakuqonda ukubaluleka kokujolisa ingqalelo yakho kuphela kwizinto ezibangela uvuyo olunzulu oluvela ngaphakathi. Kwaye xa ulandela ukuthanda kwakho ngesicwangciso sokusebenza esimiselweyo, uya kufumanisa ukuba imbewu oyityalileyo iya kuqala ukukhula.
Intsingiselo yesi-4 ka-1010: Uxhaswa ngokupheleleyo
Njengokuba uqhubeka usendleleni, uqala ukukhumbula isizathu sokuba ubone inani le-10: 10. Kwinqanaba lakho, uyazi ngomphefumlo ukuba uxhaswa ngokupheleleyo ngawo onke amaxesha zizinto ezikhanyayo ezivela kubukhulu obuphezulu bokungcangcazela. Nanini na xa ubona i-10: 10, sisikhumbuzo sokuba uneqela lokomoya elisebenza nawe-awunakuze ube wedwa.
Ungaze ulibale ukuba uyila kunye nenyani kwaye uyaxhaswa liLizwe liphela. Thatha inyathelo ngokuba ngumbhali wokubhala owazi ikamva lakho. Ukubona u-10: 10 sisikhumbuzo sendlela esebenza ngayo indalo iphela kunye nendima oyidlalayo kolu dalo lubalulekileyo lobomi. Ukuthatha uxanduva ngobomi bakho kuxa uqala ukudala izinto ozinqwenelayo, endaweni yokugxila kwizinto ozoyikayo.
Yintoni omele uyenze ngokulandelayo xa ubona i-1010?
Into ebalulekileyo ekufuneka uyikhumbule kukuba indalo iphela ifuna ukuba uqhubele phambili. Umlweli wamalungelo oluntu waseMelika uMartin Luther King Jr. wakha wathi, ' Ukuba awukwazi ukubhabha, baleka. ukuba awukwazi ukubaleka, hamba. Ukuba awukwazi ukuhamba, khasa. Nokuba kwenzeka ntoni, qhubeka uhamba . '
Logama uthatha inyathelo, uya phambili, ngaphandle kweempazamo. Ufunda kwiimpazamo kwaye yindlela okhula ngayo umphefumlo wakho.
Nantoni na oyinika amandla ukuba ikhule, ke yigcine engqondweni ngexesha elizayo xa ubona i-10: 10. Uba ngumntu ophakamileyo, uyazi ngakumbi kwaye uyazi iingcinga zakho. Ekugqibeleni, ziinkolelo zakho kunye nezenzo zakho ezenza inyani. Indalo ikuxhasa ngokupheleleyo, ke yenza ubomi bakho bube mhle!
Ngamafutshane, Izimanga, ezithunyelwe nguRene Gaudete, zayishwankathela kakuhle: 'Ubomi yile nto uyidalayo. Ubomi yinto eyandisiweyo kuwe.
Izimvo zokwenza ubumnyama (okanye ukungabinampahla ngokupheleleyo) Igumbi elingaphantsi koxinzelelo
Upeyinta njani uMgangatho oLaminate
I-4 $ Trader Joe's Thenga eyasindisa iinwele zam ezomileyo zasebusika
ukubaluleka kwe-11 11
Ingelosi inombolo 11 11
qhubeka ubona i-11: 11